လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုထားသည့် အဆိုများသည် ရေပေါ်အရုပ်ရေးသလိုဖြစ်နေပြီး လုပ်ငန်းရှင်များက တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကို လိမ်ညာနေခြင်းလား၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကိုဂရုမစိုက်ခြင်းလားဆိုသည်ကု ကော်မတီအနေဖြင့် တွန်းအားပေးသင့်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဆွေးနွေး - Open Hluttaw
လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုထားသည့် အဆိုများသည် ရေပေါ်အရုပ်ရေးသလိုဖြစ်နေပြီး လုပ်ငန်းရှင်များက တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကို လိမ်ညာနေခြင်းလား၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကိုဂရုမစိုက်ခြင်းလားဆိုသည်ကု ကော်မတီအနေဖြင့် တွန်းအားပေးသင့်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဆွေးနွေး
Posted on ဧပြီ 3, 2018 ဧပြီ 3, 2018 by
လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုထားသည့် အဆိုများသည် ရေပေါ်အရုပ်ရေးသလိုဖြစ်နေပြီး လုပ်ငန်းရှင်များက တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကို လိမ်ညာနေခြင်းလား၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကိုဂရုမစိုက်ခြင်းလားဆိုသည်ကု ကော်မတီအနေဖြင့် တွန်းအားပေးသင့်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာခွန်ဝင်းသောင်းက ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁၁) အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာခွန်ဝင်းသောင်းက အမျိုးသားလွှတ်တော်အစိုး၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစစ်ရေးကော်မတီဝင်၏အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးစဉ် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
This entry was posted in အမျိုးသားလွှတ်တော်, Amyotha Hluttaw, အမျိုးသားလွှတ်တော် ကော်မတီများ, ကော်မတီများ, အထွေထွေ, Uncategorized. Bookmark the permalink.
← သတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့်ကို တားဆီးဟန့်တားသည့် ဝန်ထမ်းများအား အရေးယူပေးရန် လွှတ်တော်အမတ်တောင်းဆို
နိုင်ငံတော်သမ္မတသစ် ဦးဝင်းမြင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို →